China FOTON C6 EVFOTON C6 EV ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Foton C6 EV ụgbọ ala na-etinye echiche ụgbọ ala "micro-mgbasa" nke na-ebelata ezigbo ọnụ ọgụgụ n'okporo ụzọ okporo ụzọ dị n'etiti etiti obodo ma ọ bụ obodo, na-edozi nsogbu njem njem nke ndị bi n'obodo ukwu nke "kilomita ikpeazụ", na-achọpụta njikọ na-enweghị ntụpọ n'etiti ọdụ ụgbọ okporo ígwè na obodo, okporo ụzọ na obodo.
N'ozuzu Dimension 6530 * 2230 * 2800
Oche ụkwụ 3900
Curb arọ 5.9 / 6.2T
Njem / Njikwa ikike 36 / 11-17
Ọnụ ụzọ njem Otu ọnụ ụzọ na-apụ apụ
Foton C6 EV ụgbọ ala na-etinye echiche ụgbọ ala "micro-mgbasa" nke na-ebelata ezigbo ọnụ ọgụgụ n'okporo ụzọ okporo ụzọ dị n'etiti etiti obodo ma ọ bụ obodo, na-edozi nsogbu njem njem nke ndị bi n'obodo ukwu nke kilomita ikpeazụ. Site na akwụkwọ ọhụụ na imepụta pụrụ iche, ọ na-egosipụta ịdị mfe na mmekọrịta, na-eduga ejiji nke ụgbọ ala "micro-mgbasa".
N'ihu ihu ihu
Foton C6 EV ụgbọ ala na-etinye echiche ụgbọ ala "micro-mgbasa" nke na-ebelata ezigbo ọnụ ọgụgụ n'okporo ụzọ okporo ụzọ dị n'etiti etiti obodo ma ọ bụ obodo, na-edozi nsogbu njem njem nke ndị bi n'obodo ukwu nke "kilomita ikpeazụ", na-achọpụta njikọ na-enweghị ntụpọ n'etiti ọdụ ụgbọ okporo ígwè na obodo, okporo ụzọ na obodo. Site na akwụkwọ ọhụụ na imepụta pụrụ iche, ọ na-egosipụta ịdị mfe na mmekọrịta, na-eduga ejiji nke ụgbọ ala "micro-mgbasa".
Ejiri usoro nchịkwa ụgbọ ala dị elu nke ọma, yana ọtụtụ afọ nke azụmahịa.
na-akwụ ụgwọ oge 12 ruo 15 nkeji oge ọ bụla, na ịkwọ ụgbọala anya nke ụgwọ ọ bụla ruru ihe karịrị 150km, na-echekwa mmanụ ọkụ na-efu 80,000 RMB kwa afọ.
Foton na-enyere ndị na-arụ ọrụ aka ime atụmatụ kachasị ọrụ site na ụzọ nyocha usoro ọrụ ụgbọ ala na nyocha akụrụngwa akụrụngwa, gụnyere ihe ndị a zuru ezu: ọnọdụ ụgbọ ala, ọnọdụ ụgwọ, ụgwọ kwa otu, kilomita / ụbọchị, wdg.
Foton na-enye ndị ọrụ kachasị akara atụmatụ na-ezo aka ụgbọala ọrụ ụdịdị, dị ka Obere-ajụ sized obodo.
Site na ọrụ ngosipụta ụgbọ, ọzụzụ ndị ọrụ, nduzi ọrụ otu, Foton na-ezube ịkọwapụta atụmatụ na azịza maka ndị ọrụ. Nhazi ọrụ otu: Kwụsị atụmatụ iwu ọdụ ụgbọ; Nchịkwa ọzụzụ nke ndị agha, gụnyere nlekọta ụgbọ oge; Njikwa ike oriri; Ọzụzụ usoro ụgbọ ala, dị ka oge ọpụpụ; staggered akọwa atụmatụ & ime ụgbọ ala usoro ihe omume. Ọrụ Ngosipụta: Nchọpụta maka ndị ọrụ; Atụmatụ ngwọta ngwaahịa; Sample & ngosipụta ọrụ; Nyocha data & nyocha; Ikpeazụ kachasị ngwọta. Ọzụzụ ndị ọrụ: NEV ihe ọmụma bụ isi; Mmezi na mmezi & kpatara nyocha nchoputa; Ọzụzụ ịkwọ ụgbọala.